Iibinta Boqortooyada Midowday ee UK ayaa hoos u dhacday fadeexad kadib - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Iibinta Boqortooyada Midowday ee UK ayaa hoos u dhacday fadeexad ka dib
Ingiriiska iibsashada guryaha kirada ah ee cusub ayaa hoos u dhacaya kadib fadeexad
TELES RELAY 15 July 2019
Tirada guryaha cusub ee laga iibiyay England iyo Wales ayaa hoos u dhacday labadii sano ee la soo dhaafay, kadib fadeexad ku kaliftay iibsadeyaal badan guryo aan la dejin karin.
England iyo Wales, 4,2% dhamaan iibka dhismaha cusub - ama 3 242 guryo cusub - waxaa loo iibiyay sida guryaha kirada ah ee 2018, oo ka hooseeya 13,3% ee 2017. Shantii bilood ee ugu horreeyay sannadkan, saamiga ayaa sii waday inuu hoos u dhaco, sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Qaranka.
Kireystayaashu waxay xaq u leeyihiin inay hantaan guri muddo cayiman - badiyaa inta u dhaxaysa sannadihii 90 iyo 120 - si milkiile lacag la’aan ah oo milkiilaha u ahaa. Waxay bixiyaan khidmadaha adeegga iyo kirooyinka mulkiilaha bilaashka ah si ay u sii wadaan dhismaha.
Eedeyntu waxay taariikh ahaan xasilloonayd, laakiin ilaa bilowgii sannadihii 2000, horumariyayaashu waxay soo saareen shuruudo ay ka mid yihiin kirooyinka dhulka oo labanlaabmaya dhammaan sannadihii 10 ama qarashaadka dayactirka xad-dhaafka ah ee ku soo rogaya kharashyo badan kireystayaal badan, oo ka tagaya qaar badan badan xanniban iyo awoodin inuu helo iibsadayaal.
Kadib fadeexad ku dhacday 2016, kuwa guryaha dhisayaa waxay u muuqdeen inay u fidinayaan guryaha ijaarasho qaali ah isla markaana bilaabaya inay ka iibiyaan khidmooyinka sidii qulqulka dakhligooda maalgashadayaasha.
Dhacdadu waxay calaamad u tahay "meel gaar ah oo aad u hooseysa taariikhda suuqa guryaha," ayuu yiri Henry Pryor, wakiilka wax iibsiga. Magdhowga dadka ay dhibaatadu saameysey waxay “ku kici doontaa balaayiin”, ayuu raaciyay.
Fadeexadan kadib, dowlada ayaa ku dhawaaqday inay damacsan tahay inay dib u eegis ku sameyso dib u habeynta nidaamka kiraynta . Bishii Febraayo 2017, waxay daabacday warbixin ay ku ballanqaaday wadatashi ku saabsan "tallaabooyin taxane ah oo lagula dagaallamayo dhammaan caddaalad darrooyinka iyo kuwa aan macquul ahayn ee heshiiska,"
. Tan iyo markaas, tirada guryaha cusub ee la iibiyay ayaa hoos ugu dhacday 17,5% bishii Janaayo 2017, iyagoo si aan caadi ahayn u gaadhay 0,8% bishii Maajo, sida laga soo xigtay xogta ONS.
Autorité de la concurence et des marchés ayaa ku dhawaaqay furitaanka baaritaanka iibinta xadgudubka ah ee heshiiska kirada bishii Juun.
Isla bishaas, dawladdu waxay ku dhawaaqday inay mamnuucayso iibinta kirooyinka cusub. sida waqtiga baarlamaanku oggol yahay.
Neal Hudson, oo ah falanqeeyaha guryaha ee madaxa bannaan ayaa yidhi "Tan iyo markii ay dawladdu xiiseyneysay arrinta, iibinta kirada guryaha cusub ayaa burburay."
Wuxuu intaas ku daray in kuwa wax dhisayey ay ka faa'iideysteen iibsadayaasha qaldan. "Nasiib darrose, waxaa jira waaxyo ka mid ah warshadaha guryaha dhista oo aan caawin karin laakiin aad uga fogaada [haddii] isu soo bandhigaan fursad ay lacag ku heli karaan."
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.ft.com/content/b30b53f8-a6e0-11e9-984c-fac8325aaa04
Kylie Jenner ayaa aaminsan fadeexadda Jordyn Woods "waa lagama maarmaan"
Kareemka iyo fries: halkan waa sababta isku dhafka ah
128 Go for 18 $, 200 Go for 30 $, 512 Go for 80 $ - BGR
Renaud ayaa "gabi ahaanba hoos u dhacay": "Ma ihi
India: Maxakamada Sare ee Canada ayaa xukuntay go, aanka Ramle iyo Sabarimala codsiyada si berri dib loogu eego | Wararka Hindiya
Shaqada: hoos u dhaca qaybta gawaarida ayaa saameynaysa dhaqaalaha oo dhan - VIDEO
Brexit miyey horseedi doontaa kala goynta midowga? - BBC Newsnight - VIDEO
Cameroon - Job Offers299
DADKA & LIFESTYLE7,405
Daawooyinka dabiiciga ah45
TECH & TELECOM2,577
Video dheeraad ah3,389